Kuteerera kwemutengi kunoenderera kweyegumi edition ye IMEX America
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » misangano » Kuteerera kwemutengi kunoenderera kweyegumi edition ye IMEX America
Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • ushanyi • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Sachigaro weIMEX Ray Bloom uye IMEX CEO Carina Bauer.
Vanopfuura zviuru zvitatu zvevatengi kusvika parizvino vakanyoreswa kuenda kuImEX America kubva kunharaunda yenharaunda - masangano ezviitiko, masangano, vanoronga zvemakambani, uye vakazvimirira - vese vane bhizinesi rekuisa uye vazhinji padanho repamusoro (rinotsanangurwa seC-chikamu, vatungamiriri, varidzi / vamwe).
Imba nyowani, yakafanana bhizimusi-inofambiswa moyo
Iyo showa ndeyekubatanidza vatengi nevatengesi kuisa bhizinesi.
Chiitiko ichi chinotamba chikamu chakakosha mukugadziriswa kwenguva refu kwebhizinesi, ichipa mukana wakakodzera panguva yekuyera chivimbo cheindasitiri uye tarisiro yekukura-nguva chaiyo uchisangana nevamwe vako uye navo.
Iyo showa inoitika kuMandalay Bay, Mbudzi 9-11 muLas Vegas uye inotungamirwa na Smart Muvhuro, inofambiswa neMPI, munaNovember 8.
MaAgency parizvino anoverengera 47% yehuwandu, vatengi vemakambani 22% apo vanobatana vatengi vanoita 9% uye vakazvimiririra vatengi 18% (vamwe - 4%).
“Pamwoyo payo, shoo iri ndeyekubatanidza vatengi nevatengesi kuti vaise mabhizimusi - iyi ndiyo hwaro hwezvose zvatinoita. Tinofara kuona kudiwa kwakadai kubva munharaunda yechiitiko chebhizinesi kuti vadzokerane zvakare kuIMEX America munaNovember. Kune vazhinji vari muindastiri, iyo showa yakagadzirirwa kutamba chikamu chakakosha mukugara kwavo kwenguva refu bhizinesi, ichipa mukana wakakodzera panguva yekuyera chivimbo cheindasitiri uye chaiyo-nguva yekukura tarisiro pavanosangana nevamwe vavanoshanda navo uye vavasina kuona ivo kumeso mumakore maviri. ” Carina Bauer, CEO we iyo IMEX Boka, inokurukura nezvekumhanyisa kunyoresa kutyaira kwechiratidziro chinoitika kuMandalay Bay, Mbudzi 9-11 muLas Vegas uye inotungamirwa na Smart Muvhuro, inofambiswa neMPI, munaNovember 8.
Vanamusangano uye vezviitiko nyanzvi vanokokwa kujoina izvo zviri kubhadhariswa seyakaitika indasitiri yavo yekumusha ne kubvisa zvemahara, senguva dzose. Vanopinda vanogona kutarisira 'yakachengeteka asi isina chena' mhenyu show chiitiko chakagadzirirwa kuzadzisa zvazvino bhizinesi zvido. Ichavagonesa kuisa nekuronga ramangwana bhizinesi ivo vachirova muchirongwa chakakura chedzidzo chakavakirwa pamakwara matsva nevatauri vanonzwisisa zvinetswa zveindasitiri uye zvinogona kuenda muna 2022.
Pamwe chete nevatengi, nyika dzepasi rose dzevaratidziri dziri kubvumirana svondo pavhiki uye dzinotenderera zvikamu zvese zveindasitiri. Izvi zvinosanganisira nzvimbo dzekuenda kuAustralia, Singapore, Dubai, Italy, Canada, Boston, Atlanta, Argentina, Hawaii, Panama nePuerto Rico pamwe nemapoka ehotera Four Seasons, Wyndham Hotel Group, Mandarin Oriental Hotel Group uye Associated Luxury Hotels International.
Carina anoenderera mberi achiti: “Vatinoshanda navo vakaita basa rakakosha mukutibatsira kugadzira shoo inoratidza hupenyu hwemabhizimusi huripo uye hwakanangana nezvinodiwa munharaunda. Tiri kushanda pamwe padyo nenzvimbo yedu nyowani - Mandalay Bay - uye guta rinotambira - LVCVA - kuona kuti IMEX America inosangana nemhando yepamusoro yehutano, kunyaradzwa uye kuchengetedzeka. Chinangwa chedu ndechekugadzira shoo inotsigirwa nematanho akachengeteka patinenge tichiendesa iyo yakasarudzika IMEX kubata kwekunakidzwa, mweya nemoyo izvo zvatinoziva munharaunda yedu zvinoshuva izvozvi. "
Tichitarisa kumberi kuchikamu chegumi cheIMEX America, Carina uye Sachigaro weIMEX, Ray Bloom vanokurukura kudiwa kwepent-up pamusika, Exhibitor uye chikamu chemubhadharo wevatengi, shanduko kune chiitiko chekuratidzira uye nezvimwe - tarisa ichangoburwa "Kutaurirana naCarina" pano.
IMEX America inoitika 9 - 11 Mbudzi kuMandalay Bay muLas Vegas ine Smart Muvhuro, inofambiswa neMPI, munaNovember 8. Kunyoresa - mahara - tinya. pano.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve sarudzo dzekugara uye kubhuka, tinya pano.
eTurboNews ishamwari ye media yeIMEX.